ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ပြောင်းလဲပြင်ဆင်သတ်မှတ်ခြင်းသည် ပြည်သူများ လူမှုစီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေ?? - Yangon Media Group
ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ပြောင်းလဲပြင်ဆင်သတ်မှတ်ခြင်းသည် ပြည်သူများ လူမှုစီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေ??
ရန်ကုန်၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ပြောင်း လဲပြင်ဆင်သတ်မှတ်သည့် အဓိကအကြောင်း ရင်းမှာ ပြည်သူများ လူမှုစီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုး တက်ရန် အခြေခံအဆောက်အအုံများ အရှိန် အဟုန်နှင့် တည်ဆောက်ရန် လိုအပ်နေခြင်း ကြောင့်ဖြစ်ကြောင်း စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေး ဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးမောင်မောင် ဝင်းက ပြောသည်။
နိုင်ငံတော်သမ္မတထံမှ ပေးပို့ထားသည့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ပြောင်းလဲပြင်ဆင် သတ်မှတ်မည့်ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ သက်ဆိုင်ရာ ပြည်ထောင်စုအဖွဲ့အစည်းက အောက်တိုဘာ ၃၁ ရက်တွင် ကျင်းပသည့် ပြည်ထောင်စုလွှတ် တော်ပုံမှန်အစည်းအဝေး၌ ပြန်လည်ဖြေကြား ရာတွင် ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
”ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ပြင်ဆင်သတ်မှတ်လိုတဲ့ အဓိကအကြောင်းရင်းကတော့ ပြည်သူများ အတွက် လိုအပ်နေတဲ့ လူမှုစီးပွားဖွံ့ဖြိုးတိုး တက်ဖို့ ဆောင်ရွက်ရာမှာ အခြေခံအဆောက် အအုံများ အရှိန်အဟုန်နဲ့ တည်ဆောက်ဖို့လိုအပ်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်”ဟု ဦးမောင် မောင်ဝင်းက ပြောသည်။
နိုင်ငံတော်ဘတ်ဂျက်တွင် သာမန်အသုံး စရိတ်နှင့် ငွေလုံးငွေရင်းအသုံးစရိတ်အရ ကြည့် ပါက ပျမ်းမျှအားဖြင့် ၇၅ အချိုး ၂၅ ခန့်ရှိပြီး ငွေလုံးငွေရင်းအသုံးစရိတ်ထဲမှာပင် တည် ဆောက်ရေးအတွက် ပါဝင်သည့်အသုံးစရိတ် မှာ ၄၁ ရာခိုင်နှုန်းခန့်ရှိကြောင်း သိရသည်။
၂ဝ၁၆-၂ဝ၁၇ ခုနှစ် ကိန်းဂဏန်းများ အရ တည်ဆောက်ရေးအတွက် အသုံးစရိတ် ၁၈၆၆ ဒသမ ၄၉၆ ဘီလီယံရှိပြီး ¤င်းတို့ အနက် စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများအတွက် ကုန်ကျစရိတ်အမှန် ၁ဝ ရာခိုင်နှုန်း၊ ကျန်အရာ များအတွက် ရာခိုင်းနှုန်း ၇ဝ နှင့် ရာခိုင်နှုန်း ၂ဝ သည် အခြေခံလုပ်သားများ၊ ကျွမ်းကျင် လုပ်သားများ၏ လုပ်ခလစာများဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါကိစ္စရပ်များကို ယေဘုယျအား ဖြင့် သုံးသပ်ပါက ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း များကို ပွင့်လင်းရာသီများအတွင်း အင်ပြည့် အားပြည့်ပြုလုပ်နိုင်ခြင်းအားဖြင့် ကြီးမားသည့် ငွေကြေးလည်ပတ်မှုနှင့် အလုပ်အကိုင်အခွင့် အလမ်းများ ပေါ်ပေါက်စေပြီး တိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှုအတွက် မည်မျှအထောက်အကူ ဖြစ်နိုင်မည်ကို တွေ့ရှိနိုင်ကြောင်း ဦးမောင် မောင်ဝင်းက ဆက်ပြောသည်။
ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများကို အရှိန် အဟုန်ဖြင့် လုပ်ဆောင်ခြင်းအားဖြင့် ဆောက် လုပ်ရေးကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် ¤င်းတို့ငှားရမ်း အသုံးပြုသည့် လုပ်သားများနှင့် မြေယာများ အပြင် အခြားဆက်စပ်လုပ်ငန်းများကိုပါ အကျိုးသက်ရောက်နိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ဦး မောင်မောင်ဝင်းက ဆိုသည်။
ယခင်က နိုင်ငံဘဏ္ဍာနှစ်ကို ဧပြီ ၁ ရက် မှ မတ် ၃၁ ရက်အထိ သတ်မှတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ၂ဝ၁၈-၂ဝ၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ်မှစတင်ကာ အောက် တိုဘာ ၁ ရက်မှ စက်တင်ဘာ ၃ဝ ရက်အထိ သတ်မှတ်ထားခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ဆယ်လီနာဂိုမက်နဲ့ ဂျပ်စတင်ဘီဘာတို့ ပြန်ပေါင်းထုပ်ကြမှာလား
တရားခွင် အတွင်း ထွက်ဆိုချက်ကို မီဒီယာသို့ မမှန်မကန် ပြောဆိုသည့် မည်သူ့ကို မဆို တရားစွဲမည်ဟ?